१७ दिन सम्म पनि किन उठेन सीताको श'व, अनुसन्धानमा के गर्दैछ प्रहरी ?
१७ दिन सम्म पनि किन उठेन सीताको श’व, अनुसन्धानमा के गर्दैछ प्रहरी ?
काठमाडौ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–५, मणिग्राममा १७ दिनअघि आफ्नै घरमा मृ त अवस्थामा फेला परेकी २७ वर्षीय सीता भण्डारी पौड्यालको शव अहिले पनि अस्पतालमै छ ।
उनका आफन्तले जिम्मा नलिएका कारण अझै अस्पतालमै भएको हो । माइती पक्षले घटना रहस्यम भएको र घटनामा सीताका पतिको परिवार संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
तर पोष्ट मार्टम रिपोर्टमा भने त्यस्तो नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी वास्तविकताका लागि भिसेरा रिपोर्ट कुरेर बसेको छ । भिसेरा रिपोर्ट आउन एक महिना लाग्ने भएकाले अनुसन्धान पनि ढिलो भएको छ । तीज मान्न माइत गएकी सीतालाई जेठाजुको छोरीको जन्मदिन मनाउन भन्दै घर बोलाइएको थियो । तर भोलीपल्टै उनी मृ त फेला परेकी थिइन् ।
घर परिवारले उनी आफै झु ण्डि एको भनेपनि माइतीले सो कुरा स्वीकार गरेका छैनन् ।
उनीहरुले सीताका श्रीमान, अमाजु लगायत परिवारका सदस्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । सीताको शव फेला परेको १० दिन पछि मात्र प्रहरीले उनीहरुको जाहेरी लिएको थियो । त्यसका लागि सीताका माइती पक्षले आन्दोलन समेत गर्नु परेको थियो । अझैसम्म आफन्तले बुझेका छैनन् । उनको शव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा राखिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर आफूहरूले अहिले आन्दोलनलाई स्थगित गरेको स्थानीयवासी शान्ता बस्याल भट्टराईले बताएकी छन् । अहिले शव उठाउँदा अनुसन्धान फितलो बनाउन सक्ने भएकाले आफूहरूले शव उठाउन नमानेको उनको भनाइ छ ।
रुपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सत्यनारायण थापाले सीआईबीको टोली पनि अनुसन्धानका लागि घटनास्थल पुगेको छ । सो टोलीले केही दिन रुपन्देहीमै बसेर अनुसन्धान गर्ने छ । प्रहरी र सीआइबीको टोलीले आफ्नै ढंगले अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।